तिलोत्तमामा वडा स्तरीय तीज गीत प्रतियोगिता : बिष्णुपुर टोल विकास संस्था प्रथम-Nagarikaawaj.com
कल्पना डुम्रे /बुटवल,भदौ १५-
तिलात्तमा वडा नं ४ र तिलोत्तमा सिर्जलशिल समाजको संयुक्त आयोजनामा वडा स्तरिय तीज गीत प्रतियोगितामा बिष्णुपुर टोल विकास संस्था प्रथम भएको छ ।
बिष्णुपुर टोल ले ५ वटा टिमलाई पराजित गर्दै प्रथम स्थान हासील गरेको हो । प्रतियोगितामा शित्तलकुञ्ज टोल बिकास संस्था दोस्रो र भक्तपुर टोल विकास संस्थाले तेस्रा स्थान हासिल गरेको छ ।
प्रतियोगीतामा प्रथम , दोस्रो, र तस्रो स्थान हासील गर्नेलाइ नगद र प्रमाण पत्र प्रदान गरिएको छ ।विजयी प्रतियोगीलाई समाजसेवी क्या.यम बहादुर खत्री, तिलोत्तमा सिर्जनशिल समाजका वरिष्ट उपाध्यक्ष पदम बहादुर पौडेल क्षत्री र तिलोत्तमा नगरगालिका वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष दिवाकर ढकालले नगद र प्रमाण पत्र सहित पुरस्कार हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।
प्रतियोगीतामा निर्णायक मण्डलको भुमिका चर्चित लोक तथा दोहारी गायक चन्द्र अधिकारी, चर्चित लोक तथा दोहोरी गायिका रितु थापा र कलाकार रुकु पाण्डेले गर्नुभएको थियो । यस अघि प्रतियोगिताको उद्घाटन गर्दै समाजसेवी क्या.यम दहादुरर खत्रीले नेपाल सबैभन्दा बढी लोक सस्कृती भएको र यसलाइ जबसम्म चन्द्र सुर्य रहन्छ तबसम्म यसको जर्गेना गर्नुपर्र्ने बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीकी नेतृ गिता सससससारुले हिजका दिनमा तिज असभ्य भएको बिचमा भड्किलो भएको र अहिले सभ्य हुदै गएको बताउनुभयो ।
सबै धर्मावलम्बीलाई समेटेर समावेशीकरण गर्दै चाडपर्व मनाउन आग्रह गर्नुभयो ।कार्यक्रममा तिलोत्तमा नगरपालीका वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष दिवाकर ढकाल र तिलोत्तमा सिर्जनशिल समाजका सहसचिब विशाल बेल्बासे लगायतले बोल्नुभएको थियो । कार्यक्रममा जेष्ठ नागरीक भिमादेबी घिमिरे, बालिका देवी वेलवासे , टिकादेवी आचार्य र लालमती चन्द«लाई नगद, प्रमाणपत्र र दोसल्ला ओढाई सम्मान गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा उत्कृष्ट नृत्यको पुरस्कार रेश्मा थापा सुवेदीले प्राप्त गरेकी छन् । जसको प्रायोजन तिलोत्तमा सिर्जनशिल समाजकी सचिव अन्जु पौडेलले गरेकी थिइन । प्रतियोगिताको सम्योजक रम्भा घिमिरेको अध्यक्षता र सञ्चारकर्मी कल्पना डुम्रेको सञ्चालनमा सम्पन्न भएको थियो । कार्यक्रममा कलकार चन्द्र अधिकारी र रितु थापाले आफनो प्रस्तुतीबाट दर्शकलाई मनोरञ्जन दिलाएका थिए ।